Dowlada Somaliya oo Koonfur Suudan ka soo daadguraynaysa muwaadiniinteeda * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Safaarada Soomaaliya ee Koofurta Sudan ayaa maanta shaaca ka qaaday inay soo daad-gureyneyso Muwaadiniinta Soomaalida ee ku go’doonsan gobolada ay ka socdaan dagaalada, kadib markii cabasho ka soo yeeray Soomaali fara badan oo saameyn ku yeeshay dagaalada u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo Mucaaradka ka soo horjeeda.
Xogyahaha Koowaad ee Safaarada Soomaaliya ee Koofurta Sudan Shaafici Nuur Calas ayaa sheegay inay bilaabeen qorshe ay Soomaalida ku go’doonsan magaalada Bor ee Gobolka Jonglie uga soo saarayaan.
“Waxaa hada qorshaheena yahay sidii magaalooyinka dagaalada ka socdaan, sida Bor oo kale inaan ka soo saarno Soomaalida ku go’doonsan, waxaan arrintan kala kaashaneynaa Hey’adaha Qaramada Midoobey ee fadhigooda yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya”ayuu yiri Shaafici Nuur Calas oo la hadlayay Idaacada BBC-da.
Mr Shaafici ayaa sheegay inay bilaabeen diiwaan gelinta dadka Soomaalida ee ku sugan magaalada Jubba, kuwaasoo uu sheegay inay ka lumeen aqoonsiyadooda, kadib markii dagaalada ay ka bilowdeen magaalada Jubba.
“Dadka Soomaalida ee ka lumay aqoonsigooda ama kuwa aan heysan waxaa ku sameyneynaa diiwaan gelin, si ay dalooda dib ugu laabtaan, waxaan u sameyneynaa warqado u fududeynaya inay dalkan uga baxaan”ayuu yiri Xoghayaha Koowaad ee Safaarada Soomaaliya ee Koofurta Sudan.
Waxaa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay wado qorshahan lagu soo daad-gureynayo Soomaalida ku go’doonsan Gobolada dalka Koofurta Sudan, waxaana uu tilmaamay inay rajeynayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay looga soo saaro meelaha ay joogaan.
Xero Qaramada Midoobey ku leedahay magaalada Bor ayaa waxaa ku jira Soomaali fara badan, kuwaasoo hantidooda la boobay, waxaana xaalad adag ku heysata xerada UN-ka, qaar ka mid ah oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay u soo gurmato.
Muwaadiniinta ku sugan Koofurta Sudan ayay waxaa daad-gureysanaya dalalkooda, kuwaasoo loo soo dirayo diyaarado, waxaana Soomaalida ay yihiin kuwo kaliya ee ku xaniban xeryaha ay gabaadsadeen oo aanay jirin cid ugu maqan